होलीमा अनुहार « paniphoto
« AFC च्यालेन्ज कप : नेपाल Vs प्यालेस्टाइन ह्याप्पी फागु !!! »	होलीमा अनुहार
By -पानीफोटो- on Wednesday March 07, 2012	कतिलाई होलीको शुभकामना भनिरहनु भनेर अनुहारमै शुभकामना पोतिदिएको रे ।
होलीमा देखिएका थप कलात्मक र रंगीन फोटोहरु हेर्न भित्र आउँनुहोस् यस्ता अमुर्त रंगरोगन गरेका अनुहार होलीमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिएका थिए ।
निकै बाक्लै इनामेल दलेछन् । दुख पनि गरे होलान् । तर इनामेलले खराबी पो गर्ने हो कि हैन ।
अनुहारबाटै झल्कन्छ होली भनेको माया, सद्भाभाव र हार्दिकताको पर्व हो भनेर ।
यी युवतीको भने पोज नै यस्तै । कसैले क्यामेरा यीनी तिर सोझ्यायो कि आँ गरेर जिब्रो बाहिर निस्किहाल्थ्यो । किन नि सँधै जिब्रो बाहिर भनेको जिब्रो बाहिर निकाल्दा विन्दास देखिन्छु रे । लौ सँधै विन्दास भइरहनु ।
यसपाली होलीमा कलात्मकता भन्दा इनामेलको बिक्री बढाउँने र मान्छे तर्साउँने खालका अनुहार धेरै देखिए ।
यी तलका साथीहरु भने वातावरणमैत्री होली मनाउँने धुनमा रहेछन् । तिहारमा देउसीको झल्को दिने गरि ‘गो ग्रिन गो ग्रिन’ भन्दै हिडिरहेका थिए । ‘गो ग्रिन’ भनेको होलीमा पनि हरियो पोतेर हिड्नु भनेको हो रै छ कि क्या हो !
अन्त्यमा, काठमाण्डौलाई पुरै पागल बनाउँदै रंगहरुको पर्व होली बिदा भएको छ । अर्को साल अझ रमाइलो गरौला ।
« AFC च्यालेन्ज कप : नेपाल Vs प्यालेस्टाइन ह्याप्पी फागु !!! »	LeaveaReply Cancel reply	You can use these HTML tags
Time ago 22 Days via WordPress.com
यही Category बाटर पनि, फागुमा असाध्यै रमाइलो हुन्थ्योआधुनिक आँखामा कृष्ण लिलाममीको ‘अचुक अस्त्र’ले म यसरी धेरै समय तह लागेपहिलो भ्यालेन्टाइन्स डे – संस्मरणविजया दशमीको शुभकामना !!!कुन देशमा कति बजे छ टिकाको साइत ?नर्बेमा मध्यरातमा घाम ?जादुगर सर – संस्मरणबुद्ध जयन्ति, मेरो वाइफाइ र तिनको सामान्य ज्ञानआमा ! सञ्चै हुनुहुन्छ ?Online Users7 Users Onlineसन्दर्भ सूचि	अलगधार